Igwe na-egwuputa ihe nke ọma igbe ụlọ ọrụ, ndị na-ebunye ihe - Ndị na-emepụta ihe na-emepụta igbe igbe China.
Ihe kacha dị ọnụ ahịa 55mm pitch 8 kaadị eth miner
JF178-B85-55 igwe na-egwuputa ihe na-anabata imewe na mgbakọ modular, na-anabata motherboard dị iche iche, B85 chipset, oghere oghere kaadị azụ 55mm, ọwa ike kaadị eserese onwe, na-anabata 8 3500RPM Fans maka mgbasa ọkụ, otu n'ime na otu ụzọ abụọ maka ọkụ dị mma. mgbasa.Bụ otu n'ime igwe ngwungwu gpu kacha mma.
Igwe na-egwuputa ihe na-eji kaadị eserese 8 65mm pitch
Igwe na-egwuputa ihe nke JF178-B85-65 na-eji nhazi na mgbakọ modular, na-eji motherboard kewara ekewa, chipset bụ B85, oghere oghere kaadị azụ azụ bụ 65mm, na kaadị eserese nwere ọwa ike na-enye onwe ya, na ikpo ọkụ ọkụ na-eji 8 dị elu. -ọsọ Fans.Otu n'ime na otu pụta dual-channel elu-arụmọrụ ikpo ọkụ ọkụ.Ọnụahịa dị ọnụ ala na àgwà a pụrụ ịdabere na ya.